'तस्करबाट पर्यावरण अभियन्ता असुरक्षित' -(अन्तरवार्ता) - The Public Today
‘तस्करबाट पर्यावरण अभियन्ता असुरक्षित’ -(अन्तरवार्ता)
७ माघ २०७६, मंगलवार ११:१९
तराई मधेश चुरे उत्खन्न विरुद्ध नागरिक समाज सडकमा प्लेकार्ड लिएर चिच्याउँछन् । तर, दुर्भाग्य, राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा चुरेमा अहिले क्रसर डनको बिगबिगी छ। डनहरुको कब्जामा चुरे परेको छ । चुरे दोहोन रोक्ने जाने पर्यावरण संरक्षण अभियानी दिलिप महतोकोे क्रसर डनले हत्या गरिसकेपछि अभियानीहरुको मनमा चिसो पसेको छ ।
मधेशको जीवन संकटमा संकटमै बन्दै गएको छ । पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव चिन्तित छन्, चुरे बचाउन सबैसंग हरेक मञ्चमा आग्रह गर्छन् । धनुषाको ढल्कबेरमा पर्ने औरही खोलास्थित चुरे भ्रमणमा पुगेका बेला लामोसमयदेखि वन तथा वातावरण संरक्षण अभियनामा सक्रिय रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल प्रदेश २ का अध्यक्ष सोम प्रसाद शर्मासंग द पब्लिक टुडेका लागि बिजय कुमार सिंहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :
१. चुरे संरक्षण भएको छ ?
–चुरेको अवस्थाको कुरा गर्दा हामी नदिसंग जोडेर चुरेको कुरा गर्छौ । चुरे एक हिसाबले कोमल पहाड छ । प्रदेश नं.–२ को आठवटै जिल्लाको चुरे अधिकांश राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र पर्छ । राष्ट्रिय वन भित्र पर्ने चुरेको संरक्षण अहिलेसम्म विधिगत रुपले नेपाल सरकारको तहगत वन कर्मचारीहरुले गर्ने गरेको छ । अहिले त्यो वन क्षेत्रमा डोकुमेन्टको हिसाबले वन डिभिजन कार्यालयले संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तथापि वन डिभिजनका कर्मचारीहरुको नगन्य रुपमा चुरे संरक्षणमा उपस्थिती छ । यो हिसाबले हेर्दा चुरे अहिले सरकारी निकायको संरक्षणको मूल विषय बन्न सकेको देखिदैन ।
२. चुरेको हालको अवस्था कस्तो छ ?
–अहिले दिनानुदिन अबैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विभिन्न माध्यमहरुबाट निकासी हुने, चुरे क्षेत्रबाट घाँस–दाउराको अलावा अन्य नदिजन्य पदार्थहरु निकाल्ने र त्यो नदिजन्य पदार्थहरु निकाली सकेपछि त्यो खोला गहिरो भइरको छ। त्यहाँ उत्खन्नको चाप परिसकेपछि चुरे क्षेत्रहरुको माटो फेरी पनि नदिमा आउने यो प्रक्रिया चाही दिनानुदिन बढिरहेको छ । नदि उत्खनन्ले चुरे विनाशमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । जुन अहिले हामीले पटक पटक देख्न सक्छौं अहिले हामी औरही नदिमा छौं । औरही नदिको यो चुरे क्षेत्रमा छौं । अहिले औरही खोला हेर्न हामी दक्षिण तर्फ गयौं भने अहिले १५ देखि २० फिट २५ फिटसम्म गहिरो खाडल भेट्छ । यहाँ स्काइभेटरले खनेर २०–२५ फिट गहिरो खनेर त्यहाँ टिपरहरु, ट्याक्टरहरु अन्य विभिन्न इक्वीपमेन्टहरु प्रयोग गरेर यो नदि उत्खन्न भईरहेको छ । अभियानीहरुले उत्खन्न गलत भो भनेर यसको विरुद्धमा आवाजहरु उठाइरहेका छन् । आवाज उठाउन गएका दिलिप महतो जस्ता अभियन्ता मारिनु परेको स्थिती छ । हाम्रा बालबच्चाहरु त्यहाँ खेल्न जाँदा खालडमा जमेको बर्षाको पानीमा डुबेर मर्नु परेको स्थिती सिर्जना भएको छ । त्यो भएको हिसाबले संक्षिप्तमा भन्ने हो भने चुरेको स्थिती दर्दनाक छ । अहिले मान्छेको हिसाबले भन्ने हो भने वेदना सह्न सक्ने परिस्थितीमा चुरे छैन ।
३. यो दर्दनाक अवस्थामा संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने चुरे किन आयो ?
–यो अवस्था आईपुग्नुमा राज्यको उदासिनता, नियमनकारी निकाय जो नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार यो संग सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय, प्रहरीप्रशासन, ईलाका देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म यो माफियासंगको तालमेलका कारणले यो अबैध उत्खन्नको क्रम बढिरहेको छ । त्यो अबैध उत्खननमा चाही सरकारी निकायको अघोषित संलग्नता छ । अघोषित उसको अनुमती छ । जसका कारणले यहाँ अभियानकर्ता, चुरे संरक्षणका अभियन्ताहरु, वन संरक्षणका अभियन्ताहरु, नदि संरक्षणका अभियन्ताहरु, पर्यावरण क्षेत्रका अभियन्ताहरु यसको पटक पटक आवाजहरु उठाइरह्नु परेको छ । तर ती मतियारहरुबाट सिकार भईरहेका छन् हाम्रा अभियन्ताहरु । त्यसको दुरावस्था के हो भने राज्य दोहन प्रक्रियामा आफै क्रियाशिल छ । कुनै पनि तहको कुरा नगरौं राज्यका हरेक संरचनाहरु चरेको सत्यानश गरेर अबैध गिट्टी बालुवा उत्खननमा सहभागि छन् । दिनानुदिन दिन दुई गुणा रात चौगुणा कमाएर करोडपति बन्ने लाल्चामा राज्यका तहगत कर्मचारीहरु देखि लिएर माफियाहरु संलग्न छन् । त्यसलाई राज्यले संरक्षण गरिरहेको छ । त्यस कारणले चुरेको दुरावस्था सिर्जना भायो ।
४. चुरे विनाशले गर्दा मानव जीवनमा कस्तो असर पर्छ ?
–सामान्य रुपले हेर्दा एउटा पानीको मुहान सुक्यो भन्छौं । उर्वरा जमिनहरु बर्बाद भयो भन्छौं । यो सब चुरे विनाशका कारणले पानीको मुहान सुकेको र उर्वरा जमिनहरु मरुभूमीकरण तर्फ अगाडी बढिरहेको हो । त्यसले हाम्रो कमजोर माटोहरु बगेर फेरी नदिमा आउने, नदि उकास हुने अनि बर्षाको समयमा फेरी पनि बाढी गाउँ वस्तीमा पस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
५. चुरे दोहोन हुनुमा दोषी को ?
–यसको दोषी कसलाई भन्ने ? दोषी त राज्य । राज्यको संरचनाहरु जे यसको संरक्षण गर्ने ठेक्का लिएको छ । उ नै यसको बर्बादी गर्ने तर्फ क्रियाशिल छ । हामी अभियन्ताहरु आफ्नो घरबाट खाएर आफ्नो अभियानमा जुटिरहेका छौं । म यो राज्यको सम्पती संरक्षण गरु । यो हाम्रो मात्र होइन । भावी पुस्तालाई हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । हामी मुल मुद्दा उठाएर हिडिरहेका छौं । तर हामी राज्यबाट संरक्षणमा छैनौं । तस्करहरुबाट हामी संरक्षित छैनौं । यो दुरावस्था हामीलाई सिर्जना भाको छ । यसैको परिणाम अस्तिको हाम्रो दिलीप महतोको हत्या हो । उ जसले पटक पटक कुरा उठायो, बर्षौ देखि कुरा उठायो । यो अभियानमा क्रियाशिल भयो । हामीसंग छलफलमा सरिक भयो । र आज दिलीप महतो तीनै गलत कर्ममा क्रियाशिल व्यक्तिहरुबाट हत्या भयो । उसको हत्या हुँदा प्रहरीले एउटा सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी मुचुल्का पनि नगरी दिलीप महतोको शव उठाएर रातारात लगेर यो दुर्घटना हो मुचुल्कामा सहि गर, ईलाका प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर आफन्त र अन्य सुभेच्छुकहरुलाई सहि गर भनेर उनीहरुलाई दबाब दियो । यो गलत अवस्था चाही सिर्जना भईरहेको छ । यसैबाट के बुझिन्छ भने कुनै न कुनै रुपमा तस्करहरुसंग राज्यका संरचनाहरुको संलग्नता छ । र त्यो राज्यको संलग्नता वीना कसैले पनि कुनै पनि नदिबाट एक मुठ्ठी बालुवा लिएर जान पनि अवस्था सिर्जना हुदैन ।
एकै दिन १९८ किलो गाँजासहित तीनजना पक्राउ